Ngaba ufumene umqondiso ovela kwingelosi, okanye ngaba waziva uchukunyiswa yingelosi? Ndiyathemba ukuba kuyintsikelelo ukufumana uphawu lwengelosi ngexesha lakho lokuswela okanye ekuphenduleni umthandazo wakho. Ukukunika ukucaca kuhambo lwakho lobomi, wawukhokelwa apha ukuze uve intsingiselo yale miqondiso yengelosi kwaye uqonde ukuba zikunceda njani kwindlela yakho ngeli xesha.
1111 yenza umnqweno
Abantu abaninzi kwihlabathi liphela bayayibona imiqondiso yeengelosi, ngakumbi ngamaxesha abalulekileyo obomi babo. Le yinto enokwenzeka ukuba yenzeke nakuwe, kodwa ngaba uyazi izizathu zokuba ubona imiqondiso yeengelosi?
Ngokobuthixo imiqondiso inokuvela ngaphambi, ngexesha, okanye emva kweziganeko ezibalulekileyo ebomini bakho, ngakumbi xa umntu omthandayo eswelekile. A Umntu omthandayo ongasekhoyo unokuba sisikhokelo somoya wakho , Kunye neengelosi, banokukunika imiqondiso yokuzisa ithemba kunye nentuthuzelo xa uziva ulilolo kwaye unqanyuliwe, okanye xa ufuna inkuthazo. Ngesi sizathu, yazi ukuba xa ubona umqondiso kaThixo, uyancedwa kwaye uncediswe zizidalwa zokomoya, ezifanaizikhokelo zomoya kunye neengelosi,ukusuka kwiindawo eziphezulu.
Ezi zinto ziphezulu zingcangcazelayo zihlala zisecaleni kwakho kwaye zilapha ukukunceda ufezekise injongo yakho yobomi emhlabeni. Nangona singenakubabona, banxibelelana nathi ngalo lonke ixesha ngeempawu kunye neempawu. Konke ekufuneka sikwenzile kukuthathela ingqalelo le miqondiso yeengelosi kwaye siqonde intsingiselo yemiyalezo yeengelosi.
Bakukhokela ngokukhuselekileyo kwindlela yakho ngokuthumela imikhondo. Ngokukodwa, bakwenza oku ngokunxibelelana ngemiqondiso kunye neesimboli ezinjengokuphindaphinda amanani, iintsiba, iingqekembe, imvula, amafu, ukurhawuzelela imvakalelo, amavumba, ukukhanya kweepbs, izilwanyana, izityalo, ukukhala ezindlebeni, iingoma zomculo, kunye namaphupha. Konke okufuneka ukwenze kukunika ingqalelo le miqondiso kwaye uqonde intsingiselo yemiyalezo yabo yeengelosi.
Kule nqaku, i kugxilwe kwiingelosi . Ngokungafaniyo nezikhokelo zomoya, iingelosi azizange ziphile njengomntu. Iingelosi zizidalwa ezintle zasezulwini ezikhethekileyo Idalwe nguThixo ukukunika njengezipho . Ngabathunywa abathunyelwe kuwe nguMdali oNgcwele ukuze bancede wena kuzo zonke iinkalo zobomi bakho. Gcina ukhumbula ukuba kukho imiqondiso eyahlukeneyo evela kwiingelosi, kwaye kubalulekile ukufikelela kwi-intuition yakho kwaye ufumane ukuba zithini na iimpawu zobuthixo kuwe.
Khumbula, Unabo bonke ubulumko ngaphakathi kwakho ngoko kukhuselekile ukuthembela iimvakalelo zakho . Ukukunceda ukukhokela, nolu uluhlu lweentsingiselo zeempawu zengelosi eziqhelekileyo ezili-13 ezinokubonakala ebomini bakho kunye nezizathu ezili-10 zokomoya zokuba uqhubeka uzibona.
13 Olona Phawu luqhelekileyo lweengelosi
Iingelosi zinxibelelana nathi ngeendlela ezahlukeneyo, kwiimeko ezininzi, ngemiqondiso kunye neesimboli. Nanini na xa ubona le miqondiso yengelosi, umyalezo ucacile: iingelosi zakho ezikufutshane zikufutshane, zikunceda kwaye zikuncede. Umqondiso kukukunika isiqinisekiso sokuba ulapho kanye kufuneka ubekhona njengoko ubomi bakho butyibilika ngokugqibeleleyo ngokwecebo eliyintloko loMhlaba. . Iimpawu zeengelosi eziqhelekileyo zezi:
Umqondiso wokuqala weengelosi: Amanani aphindaphindiweyo
Ukubona ukuphindaphinda kweepateni zamanani njenge 11:11 kwaye 444 Yimiqondiso kaThixo yokuba ingelosi izama ukunxibelelana nawe. La manani aphindaphindiweyo ayimpawu ezicacileyo ezithatha ingqalelo yakho ngokulula ukukunceda ukuba wehlise isantya kwaye ucinge ngokwenza ukhetho lobulumko olunokukuzisela uxolo olunzulu, ulonwabo kunye nemvakalelo yokwanelisekaebomini bakho.
Uphawu lwengelosi yesi-2: Iintsiba
Ukufumana iintsiba, ngakumbi ezinkulu, kwiindawo apho zingafumaneki ngokuxhaphakileyo kunokuba ngumqondiso wokuba ingelosi yakho ikunika inkuthazo yokuqhubeka nendlela yakho kuba ngokuqinisekileyo ukhokelele kwicala elilungileyo! Khawukhumbule ukuzikhawulezisa usuku olunye ngexesha, kwaye uthembe ukuba indlela yakho iya kutyhilwa ngakumbi kuwe emva kwenyathelo ngalinye olithathayo.
Uphawu lwengelosi yesithathu: iipennies kunye nezinye iingqekembe
Ukufumana iipeni, idime, okanye ezinye iingqekembe ezibengezelayo kwiindawo ezingalindelekanga kunokuba yindlela yengelosi yokukuxelela ukuba unenkxaso yobuthixo ekwakheni ubomi obuninzi obunentsingiselo yokwenene kuwe. Ngokudibana noMdali oMkhulu, iingelosi zisebenza ngasemva ukuze zilungelelanise yonke into ekujikeleze ukuze uqhubeke nokwenza ubomi obunqwenela ngokwenene. Kwaye ezantsi, unokuqonda ngokupheleleyo ukuba yonke into iyakusebenzela ngexesha elifanelekileyo.
Umyalezo kukuhlala unethemba ngamaphupha akho ngokuguqula izimvo zakho kubomi obuphilayo obubonakalayo. Ngamafutshane, Yonke imali oyifumanayo luphawu lokwenza utyalomali ebomini bakho ngokuthatha inyathelo kwicala leminqweno yakho eyona inzima .
Uphawu lwengelosi yesi-4: Imvula
Ukubona imijukujelwa ngaphandle kobukho bemvula kunokuba luphawu olucacileyo lwengelosiyonke into izakulunga. Khumbula ukugcina iingcinga zakho zilungile kwaye indalo iphela iya kuzisebenzela ukunceda wonke umntu obandakanyekayo kwimeko ethile.
Ekugqibeleni, uyakhumbula ukuba impumelelo yakho inegalelo kwimpumelelo yoluntu ngokubanzi. Ngolu lwazi, uyaqonda ukuba ubomi buhlala butshintsha kwaye buqhubela phambili ngezimvo ezintsha kunye nophuhliso, kwaye wonke umntu ophila kulo mzuzu uyafunda, uyavela, kwaye uyahamba kunye ukuya kwihlabathi elingcono kubo bonke.
Uphawu lwesihlanu lwengelosi: Iimilo zelifu
Ukubona amafu eengelosi, ubuso, intyatyambo, intliziyo, okanye ezinye iisimboli esibhakabhakeni kunokuba yimiqondiso evela kwingelosi yakho ukukukhumbuza ukuba awuwedwa kuhambo lwakho. Uyayikhumbula loo ntoUThixo uyafumaneka kuye wonke umntu kwayeuhlala unoncedo loMdali xa ucela uncedo. Uyakhumbula ukuba umthandazo ubalulekile kuba uvula ijelo eliya kuThixo. Kwaye xa ucela uncedo, uyanikwa.
Nokuba ucela uncedo kubomi bakho bokomoya okanye ufuna ingcaciso kuyo nayiphi na indawo yobomi bakho, yonke into ekufuneka uyenzile kukucela kwaye ube nokholo olupheleleyo lokuba umthandazo sele uphendulwe. Umthandazo wakho ukwinqwelo yokomoya yoMdali oyiNgcwele, kwaye ngoku ulinde ukuba ubonakalise ubuyele emhlabeni ngokwenyani yakho ebonakalayo. Ngokubalulekileyo, uyakhumbula ukuba iziphumo zakho ziya kukhawuleza xa unokholo olunzulu.
Isibonakaliso seengelosi yesi-6:Ukugodola okanyeIimvakalelo Zokuchukumiseka
Ukufumana ukubanjwa yingelosi okanye ukuziva ubambe ongezantsi komqolo wakho okanye amanye amalungu omzimba wakho kunokuba luphawu olubonisa inyani, ngakumbi xa ubona, ufunda, okanye usiva into ehambelana nomphefumlo wakho. Inokuba yindlela yengelosi yakho yokwazisa ukuba ubukho kwinyaniso yokomoya.
lithetha ntoni inani leengelosi ezingama-555
Inye inyaniso yomoya oqala ukuyikhumbula kukuba wadalwa kwi-DNA yokomoya yoMdali, kwaye ngenxa yoko, unenxalenye yoMdali ngaphakathi kwakho. Ngalesi sikhumbuzi, uyaqonda ukuba awusoze wohlukane wedwa, kwaye ingelosi yakho ekugcinayo ilapha ukukunceda ukukhokela kwindlela yakho ekufumaneni ngakumbi ukuba ungubani nendawo yakho kweli hlabathi limangalisayo okhethe ukuhlala kulo. Khumbula njalo, ulilungu leNdalo iphela, kwaye xa sisonke simanyene, xa sisonke.
Isibonakaliso seengelosi yesi-7:Kunuka okanyeIvumba
Ukuva ivumba elimnandi, ngakumbi kwizityalo okanye iintyatyambo, ezithi zivele zingaveli ndawo, kunokuba ngumqondiso wokuba omnye umkhosi kaThixo weengelosi ukunika uxolo nentuthuzelo ngelixa ukhula ngexesha lomphefumlo.
Intsingiselo ye10 10
Gcina ukhumbula, ivumba elithile linakho vusa inkumbulo ethile yomntu othile okanye isiganeko esibalulekileyo ebomini bakho esisebenza njengomzuzu okhethekileyo kuhambo lwakho lokuphilisa. Uhambo lokuphilisa lumalunga nokukhumbula indlela owawuziva ngayo ekuqaleni kohambo kwaye uzingca ngenkqubela phambili yakho endleleni.
Umqondiso weengelosi ze-8:Imibala yomoya, iAuras, iOrbs, okanye iSparklesyoKhanya
Ukubona ukujikeleza okukhulu, i-auras, i-orbs, ukukhanya kokukhanya, okanye ukukhanya kokukhanya kungumbonakaliso wokuba ujikelezwe ziingelosi, kwaye banokuthatha amandla 'okukhanya' ukukuthuthuzela. Nangona ii-orbs kunye nezibane ezahlukeneyo zinokumela eminye imimoya, umbono oqhelekileyo kukuba Unikwe isipho sokubona ngokucacileyo kwaye uqonde izinto obungakwaziyo ukuzibona nokuziqonda ngaphambili. Uya kuba ukwazi ngakumbi ngamava akho obuntu emhlabeni, kwaye yunyukela kwinqanaba lokungcangcazela eliphezulu apho ukhona bona 'umlingo' utyhileka kuhambo lwakho lobomi.
Kwimiba yentliziyo, ukuba ubona i-orbs eluhlaza okanye ukukhanya, loo mthombo wokukhanya unokuba ngumqondiso wokuvisisana nokubuyiselwa kwi-Archangel Raphael oyingelosi yokuphilisa. Soloko unokholo lokuba ukhuselekile kwaye ukhuselekile. Thembela nje ukuba ingelosi yakho ekugcinayo ihlala ikunye nawe, kwaye ihlala isebenza nezinye iingelosi kunye nemimoya ukukukhokela ngeempawu ezithuthuzelayo kuwe .
Uphawu lwengelosi ye-9:Epiphany okanye IsiTyhilelo
Ukuba ne-epiphany okanye umbono okrelekrele ngequbuliso uvela kumandla okomoya oMdali oNgcwele xa usendleleni yokudala kwaye xa uvulekile ukufumana iimpendulo. Kuba iingelosi zizithunywa zikaThixo, zinokunceda ukuhambisa ezi epiphani okanye izimvokuwe ngeendlela ezahlukeneyo zokuyila nezingokobuthixoukukunceda ngesisombululo. Ekugqibeleni, wenaunayo nje le 'ngqondo yokwazi' wento ekufuneka uyenzile ngokulandelayo, kwaye uziva uzithembile kwicala lokhetho lwakho lokuqonda njengoko usakha ubomi bakho kwaye ubuqhubela phambili kunye noluntu kunye nehlabathi eliguqukayo.
Umqondiso weengelosi ze-10:Ukukhala kwiindlebe
Ukuva isandi esirhabaxa sokukhala komsindo kwenye okanye zombini kwiindlebe zakho okomzuzwana nje yindlela yezidalwa zasezulwini zokunxibelelana nawe. Inokuba luphawu lokuba ulwazi olubhaliweyo olunekhowudi luthunyelwa kuwe, kwaye amaxesha ngamaxesha, olu lwazi ngumyalezo ovela kuThixo onokuwusebenzisa kamva ukukunceda kwimeko yobomi. Ngokubalulekileyo, xa usiva ukukhala, sebenzisa intuition yakho ukuqonda ukuba loluphi uhlobo lomyalezo oluthiwe thaca kuwe kwaye uyathemba ukuba ulwazi oluthe kratya luya kutyhilwa ngexesha elifanelekileyo, lenzelwe wena kuphela.
Uphawu lweengelosi ze-11: Ukuva umculo okanye iingoma
Ukuva umculo okanye iingoma zidlala ngokungalindelekanga inokuba ngumqondiso osuka kwingelosi yakho ithumela ulwazi kuwe ukuze ikuncede ngesisombululo okanye ikunike umyalezo malunga nomntu othile okanye imeko. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba unake amagama okanye amazwi omculo owuvayo ukuze uqonde umyalezo ozisiweyo. Ngokomzekelo, iingoma zengoma ezivela ngokungacwangciswanga kwinkqubo yakho yemihla ngemihla zinokubonelela ngemikhombandlela yokukukhokela ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo malunga nomba othile. Ekugqibeleni, kungcono ukuba uqaphele umzuzu wakho wangoku ukuze ukwazi ukuqonda zonke izikhokelo kunye neempawu ezithunyelwa ziingelosi kuwe.
Isibonakaliso seengelosi ze-12: iintaka, amabhabhathane, oonombombiya kunye nezinye izilwanyana
Ukubona i-hummingbird, ibhabhathane, i-dragonfly, okanye esinye isilwanyana esiwela indlela yakho ngokungalindelekanga sinokuba luphawu lwengelosi. Isidalwa ngasinye sezilwanyana zasendle sinomyalezo onamandla (okanye isifundo) kuwe kuhambo lwakho lobomi.
Umzekelo, ingcungcu ihlala ikhangela incindi emnandi ngaphakathi kweentyatyambo, kwaye iintyatyambo ziyayithanda ingcungcu kuba ikhupha incindi kwintyatyambo eziyinyakazelayo. Ngesi sizathu, i-hummingbird inxulunyaniswa neempawu zokuphilisa zeentyatyambo. Ngale nto engqondweni,ukuba ubusoloko ucinga ngokutshintsha kwamakhondo kunye ne-hummingbird ngesiquphe ebomini bakho, umyalezo opheleleyo wokomoya kukujonga umsebenzi wokuphilisa ngeentyatyambo kunye namayeza. Ingcungcu ikufundisa ukuba ufumane kwaye usebenzise izityalo ezithile ekusebenziseni amayeza.
Ke khumbula oku, nasiphi na isilwanyana esibonayo ebomini bakho, kuya kufuneka uphonononge umyalezo ofihliweyo wesimboli sesilwanyana ukukunceda ekukhokeleni endleleni yakho.
Isibonakaliso seNgelosi ye-13: Ukubona iingelosi okanye ezinye iimpawu zobuthixo ephupheni
Ukukhumbula ukuba ubone isidalwa sasezulwini, isithunzi, okanye obunye ubume obuvela kuThixo okanye umqondiso kwiphupha lakho yintsikelelo yokwenene. Umyalezo owomeleleyo wokomoya ukukunika intuthuzelo noxolo xa ufuna amandla ngamaxesha oxinzelelo, okanye ukuba sowuza kutshintshela kobu bomi uye kolandelayo.
Ngokubanzi, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhumbule kukuba iingelosi zikujikelezile ngalo lonke ixesha, kwaye zenza ukuba ubukho bazo buzive naninina xa ufuna ezona nkxaso nenkokhelo.
Izizathu ezili-10 zokuba ubona iimpawu zeNgelosi
Isizathu sokuqala: Uvusa ngokomoya
Isizathu esinye esicacileyo sokuba ubona imiqondiso yeengelosi kukuba uyavuka kwaye uziqonda ngakumbi kunye nohambo lwakho. Xa oku kusenzeka, ukuphindaphindeka kwakho kuphakama kwaye uyakwazi ukuhlangana nezinto eziphezulu ezinolwazi oluza kukunceda endleleni yakho. Ngesi sizathu, ingelosi yakho ekugcinayo ifuna ukukuxelela ukuba eli lixesha elibalulekileyo lokuba ubengumntu wenene kwaye uthembeke kwinto ofuna ukuyishiya njengelifa lakho emhlabeni.
2 Isizathu: Unenkxaso epheleleyo kaThixo
Isizathu sokubona imiqondiso yeengelosi kukuba ufuna isikhokelo kwaye ingelosi yakho ikwazisa ukuba unenkxaso kaThixo. Umyalezo weengelosi kukuba uhlala uncedwa kulo lonke uhambo lwakho. Kufuneka ucele uncedo kwaye unokholo lokuba into oyifunayo iza kuza ngeendlela ezingalindelekanga.
Okwesithathu Isizathu: Uhambo lwakho lwenzeka ngokugqibeleleyo
Xa ungakholelwa malunga nendlela yakho yobomi okanye umbuzo wokuba uthathe isigqibo esifanelekileyo, ukubona iimpawu zengelosi luphawu olucacileyo lokuba kufuneka uthembele ukuba buqhubeka njani ubomi bakho. Iimpawu zengelosi zisebenza njengezikhumbuzo zenkuthazo yokuba unyamezele kwaye uzityhale ngokwakho ukuze ube lolona hlobo lubalaseleyo.
4 Isizathu: Uyinxalenye Yento Enkulu
Esinye isizathu sokuba ubone iimpawu zengelosi kukuba unenkolelo yobuxoki yokuba uwedwa ngokupheleleyo kwaye awunakuzinceda. Ingelosi yakho ifuna ukukuxelela ukuba awukahlukanga. Ngokwenyani, uyinxalenye yeNdalo iphela kwaye ngokudibeneyo, sonke senza uMhlaba wonke. Njengomsonto, uyanxibelelana neminye imisonto, kwaye emfanekisweni omkhulu, sisebenza kunye kwaye senza ikhonkco lobomi. Ngesi sizathu, sonke sinxibelelene njengoMnye.
5th Isizathu: Ujongiwe kwaye ukhuselwe
Ingelosi yakho ekugcinayo ilapha ukukunceda nokukhusela. Uya kulufumana uphawu lwabo njengokukhanya kokuphefumlelwa okanye umbono okhawulezileyo nanini na xa ufuna uncedo kwimeko. Ulwazi luya kuza kuwe ngokwendalo ngexesha elifanelekileyo xa ulifuna kakhulu.
6 Isizathu: Uyaqala ukukhumbula ukuba ungubani ngenene
Ukubona iimpawu zengelosi luphawu olucacileyo lokuba kufuneka ukhumbule ubunjani bobukho bakho. Uhlala uthwele ilangatye loMdali ngaphakathi kwentliziyo yakho kwaye ngoku lixesha lokuba ujike loo mlilo ube lilangatye. Ke xa ufumana uphawu lweengelosi, lixesha lokuba ube lukhanyiso endaweni yokukhangela. Njalo khumbula: Kukukhanya.
7th Isizathu: Ukulungele ukuphilisa
Ingelosi yakho ekugcinayo ihlala ithumela imiqondiso ukukunceda ukukhokela kuhambo lwakho. Uya kwazi xa ilixesha lokutshintsha iindlela xa uziva unqanyuliwe ebomini. Nanini na xa ufuna uncedo, uya kubona imiqondiso yeengelosi ezikhomba kwicala elitsha. Gcina ukhumbula, amanxeba akho amadala ahlala efuna ukuphola ngaphambi kokuba uthathe enye indlela. Ngale ndlela, tZiruse ngakumbi kancinci kwaye wazi ukuba amava akho emhlabeni acwangciselwe ukukunceda ufunde kwaye ukhule ube sisiqu sakho esiphakamileyo. Khumbula oku: Yonke into iyenzeka kuwe hayi ngokuchasene nawe!
8th Isizathu: Ukuvumelanisa neZidalwa eziPhakamileyo
Synchronicity luphawu olucacileyo lokuba ukhonakwindawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo kwayeIingelosi zithumela imiqondiso ukuze zithathe ingqalelo yakho ngalo mzuzu. Xa ubona ukuphindaphinda kweempawu zengelosi, yazi loo ntoiAyisiyongxaki. Ukubona u-11: 11, 3: 33, 4: 44, okanye amanye amanani aphindaphindiweyo sisalathiso sokuba uhambelana nesiqu sakho kwaye amanani eempawu asebenza njengezikhokelo zokukunceda wenze izigqibo kuhambo lwakho.Ke naka amanani avelayo endleleni yakho kwaye ukhumbule ukucela ingelosi yakho ekuncedayo nanini na xa ufuna ukucacelwa.
9th Isizathu: Ingelosi yakho ihlala inawe
Xa ungahlali kumzuzu wangoku, akukho lula ukuba ungene ngokuzikhethela kwimiyalezo yengelosi yakho. Kodwa xa uhlala 'ngoku' kwaye usazi yonke into ejikeleze wena ngalo mzuzu kanye, kuya kuba lula kuwe ukuba uqaphele imikhondo kunye nemiqondiso kwaye uve imiyalezo yeengelosi. Ngesi sizathu, xa ufumana umqondiso ovela kuThixo, themba ukuba ingelosi yakho inawe kwaye uzama ukufumana ingqalelo.
10th Isizathu: Uluthando
Nanini na xa uva ubukho bengelosi yakho ekujikelezayo, themba ukuba ingelosi yakho ihambisa umyalezo wothando olungenamiqathango kuwe. Ingelosi imiqondiso oyibonayo iya kukunceda ukhumbule ukuba uyathandwa ngokwenene kwaye uphelele. Kuba uyimbonakalo egqibeleleyo yoDalo oluNgcwele, ubuNgcwele buhlala bungaphakathi kuwe, kwaye ngenxa yesi sizathu, uhlala ushukuma nenyaniso. Khumbula, wenziwe ngento elungileyo nengunaphakade, into emsulwa neyinyani- kwaye oku kuchaza eyona nto uyiyo. Uluthando.
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa ubona uphawu lweengelosi?
Yiba nesimo sokubulela uthando kunye noncedo lwengelosi yakho xa ufumana uphawu. Ukuba uziva ungaqinisekanga, ask ingelosi yakho ekugcinayo ukuze ufumane imiqondiso ecacileyo kunye nemiyalezo ukuze kube lula kuwe ukuba uyiqonde. Ungabuza uthe cwaka okanye ngokuvakalayo kwaye yiba nomonde njengoko impendulo oyifunayo iya kutyhilwa kuwe ngexesha elifanelekileyo . Ukukunceda ukuba uphuhlise ubudlelwane bakho neengelosi kunye noMdali kwaye ukuba uhambelane ngakumbi nobukho babo, apha ngezantsi zezinye iindlela ezisisiseko zokufumana imiqondiso kunye nemiyalezo yabo:
Thandaza uze ucamngce : Khumbula oku: Xa uthandaza, uthetha noThixo, kwaye xa ucamngca, uva iimpendulo zaKhe. Xa ucamngca, uyaqonda ukuba xa ugxila ekuphefumlweni kwakho njengoko uphefumlela amandla kaThixo (uxolo) emzimbeni wakho, wenza isenzo esivumela uxolo ukukhupha lonke ixhala lakho emzimbeni wakho . Kule nkqubo, ugutyungelwe luxolo ukuze uve iimpendulo ozifunayo. Mamela ngentliziyo yakho.
Ijenali okanye iiNcwadi zokubhala : Chaza iimvakalelo zakho kunye neminqweno yakho ngamazwi kuMdali nakwiingelosi zakho. Ungawagcina amagama akho abhaliweyo kwindawo ekhuselekileyo okanye 'uwathumele' kwindalo iphela ngokuwatshisa. Ngokuchaza iimvakalelo zakho, unxibelelana neminqweno yakho kwiqela lakho elingcwele. Khawufane ucinge kwaye ube nokholo lokuba uza kufumana iimpendulo ozifunayo. Veza umphefumlo wakho.
Amakhandlela okuKhanya Amakhandlela akhanyayo ukukukhumbuza ngokwasemzimbeni ukuba ukukhanya okungcwele sele kungaphakathi kuwe. Akunyanzelekanga ukuba ufune ukukhanya, kuba usisikhanyiso. UThixo uphakathi kuwe, nawe ukuThixo. Ngenxa yokuba umanyene noThixo, ukukhanyisa ikhandlela kukukhumbuza ubunye bakho. NjengoMdali, khanyisa ukukhanya kwakho naphi na apho uya khona kwaye ube sisikhokelo soxolo.
Khumbula ukuba ingelosi yakho ekugcinayo yabelwa wena ngexesha lokuzalwa kwakho kwaye ingelosi yakho ikunye nawe ngoku-ngoku. Yinto nje yokulungisa imiyalezo yabo ngokunika ingqalelo kuyo yonke into eyenzekayo ejikeleze wena. Nanini na xa ubona iimpawu zengelosi, qiniseka ukuba yimiyalezo kaThixo yothando kunye nokukhanya ukukunceda ukhokele indlela yakho ngokukhuselekileyo.
Khumbula, awuwedwa. Nangona kukho iimeko ezithile apho iingelosi zingenakho ukuphendula izicelo zakho ezithile kuba zinento ebhetele ekugcinele yona, themba ukuba iingelosi zihlala zikunye nawe kwaye zihlala zikhangela iindlela zokukunceda.
Into ekufuneka uyenzile kukubuza.
I-15 yeeKhalenda zodonga eziBalaseleyo (kunye nokukhuthaza) zango-2018
Ingcebiso ekhawulezileyo # 34: Ungayikhusela njani ikhaphethi xa uspeyinta iibhodi ezisisiseko
Ngaphambi & Emva: Ikhitshi likaEmily Henderson litshintshe indlela endigcina ngayo abaphathi bam
222 intsingiselo kuthando
yintoni u12 12